Xiaomi Mi 11: Nyocha, njirimara na ule igwefoto | Gam akporosis
Firmlọ ọrụ Asia na-aga n'ihu na-arụsi ọrụ ike iji nye njedebe nke ụdị niile, maka ihe Xiaomi ọ naghị akwụsị site na mbupụta ọ na-eme mgbe niile nke na-eme ka anyị tufuo onwe anyị n'oké osimiri nke ọnụ. N'oge a, dịka ị pụrụ ịhụ, anyị ga-elekwasị anya ma ọ dịkarịa ala na ihe kachasị emetụ ọhụụ kachasị ọhụrụ.
Anyị nwere tebụl Xiaomi Mi 11 ọhụrụ, ngwaọrụ "elu" nke na-abịa ịsọ mpi na ndị kachasị mma n'ahịa, ọ ga-abụ ọnụ ahịa ya? Chọpụta anyị ihe bụ uru ya yana n'ezie gịnị bụ ntụpọ ya ka i wee nwee ike ịtụle nzụta gị nke ọma.
3 Multimedia ngalaba
Nke a Xiaomi Mi 11 na-eju anya tumadi n'ihi akụkụ ahụ, anyị agaghị agọnahụ ya. Ọ bụrụ na Samsung mere ka akụkụ ahụ n'akụkụ nke Huawei mechara rụtụ aka na ya, ugbu a, ha ekpuwe ha okpueze gụnyere nsonye na nsọtụ ha niile, a na-akpọpụtakwu abụọ n'akụkụ, na ndị ọzọ abụọ dị obere karịa na elu na ala. Isi nke uto, ọ bụ ezie na mụ onwe m na-ahọrọ ihe ntanetị dị mma, ọ bụ eziokwu na aka a na-ahụ anya dị ezigbo ụtọ, dị nha anya na nguzogide nke ọnụ.
Akụkụ: 164.3 x 74.6 x 8.06
Ibu ibu: 169 grams
Na azụ enwere otu iko mara mma nke nwere obere akụkụ, ebe nnukwu igwefoto igwefoto atọ juru oke. Ma ọ dịkarịa ala, ọnụ igwe ahụ na-enyere aka ijide ọnụ, nke na-enweghị ihe mkpuchi na-atụ egwu n'ezie. Nke ahụ bụ ihe ijuanya n'ihi ịdị ọkụ ya, obere gram ole na ole n'okpuru ụfọdụ Samsung Galaxy S21 ma ọ bụ Huawei P40 Pro. Na aka ọ na-adịchaghị adịchaghị na ọ bụ otu anyị chọrọ isi nyefee gị ya. Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike, ị nwere ike zụta ya na ọnụahịa kacha mma na Amazon.
Xiaomi enweghị ike ịbanye na ọdụ a, ọ dịkwala. Na-ahapụ ndị Ogwashi Sanpdragon 888 nwere ike kariri egosiputara ya. Maka nke a, ọ ga-esonyere ya 8GB nke RAM na ụdị nke anyị nwalere. Nke a enyela anyị nsonaazụ Geekbench nke 1.127 / 3.754, n'elu Galaxy S21 Ultra na OnePlus 8 Pro.
Nka na ụzụ nkọwa Xiaomi Mi 11
Nlereanya Anyị bụ 11
Usoro njikwa Gam akporo 11 na MIUI 12
Ihuenyo 6.81 "AMOLED site na mkpebi QHD + / 120 Hz na HDR10 +
Nchekwa n'ime 128 / 256GB
Igwefoto na-aga n'ihu 108MP / 13MP Ultra Wide Angle 123º / 5MP nnukwu
Igwe n'ihu 20MP nwere oghere f / 2.4
Njikọ Bluetooth 5.2 - USBC - WiFi 6 - 5G - GPS - NFC - Infrared
Atụmatụ ndị ọzọ Na ihe ntanetị mkpịsị aka ntanetị - Igwe okwu sterị
Batrị 4.600 mAh na 55W ngwa ngwa na 50W Qi ụgwọ - Gbanwee ego ruo 10W
Akụkụ 164.3 x 74.6 x 8.06
Echere m na ọ bụ ihe doro anya na n'ọchịchị nke ike na arụmọrụ anyị agaghị enwe ihe ọ bụla. Anyi aghaghi icheta na modem 5G X60 ejikotara ya na nhazi iji chekwaa batrị ka o kwere mee nakwa na e wuru ya na ulo oru 5nm. Omume ahụ dị mma na ule ahụ, ma yana ọrụ ndị a na-emebu ma na-achọ ihe ọzọ n'oge egwuregwu ahụ, ee, anyị nwere ike ịchọpụta oke okpomọkụ na azụ mgbe ị na-egwu egwu, ọ dịghị ihe na-enye nsogbu.
Ugwu Xiaomi na Mi 11 a panel 6,81-anụ ọhịa AMOLED nke gunyere mkpebi 3200 x 1440 QHD +, nke a na-akpọkarị 2K. Nchịkọta a ga-enwe ume ọhụrụ nke 120 Hz, ee, Xiaomi kwupụtara na ha ga-abụ "mgbanwe", yabụ nsonaazụ ya dịgasị iche dabere na mkpa nke ngwaọrụ ahụ, agbanyeghị na anyị ejiri obi eziokwu achọpụtabeghị na iche na ojiji kwa ụbọchị. O nwere nha nke 20: 9 na njupụta nke pikselụ kwa inch nke 515. A na-edozi panel ahụ nke ọma, na-acha ọcha oyi na anyị nwere ike ịhazigharị na ntọala na agba ndị na-adịghị eju afọ. The akpaka ihie enyewo anyị ụfọdụ ndị ọzọ onwe ha ukpụhọde nsogbu, ma anyị na-enweta ntaneti 1.500 nke na-eme ka ọ dị mma n'èzí na ọdịiche nke 5.000.000: 1 dị ezigbo mma.
Jiri nke n'ihu: 91,4%
Oghere dị na ihuenyo oge a na-anọtụ ntakịrị n'aka ekpe, ọ ga-abụrịrị ngwa ngwa karịa, mana ọ naghị akpasu iwe. Banyere ụda ahụ, anyị nwere asambodo stereo, agbanyeghị, n'agbanyeghị mbọ ahụ, ogo dịtụ larịị, ọ bụ ezie na kacha olu nke 83db ezuola. Ọdịdị ọdịyo ka bụ ọrụ na-echere na Xiaomi.
Na ọkọlọtọ size akpaka foto anyị na-achọta ezigbo nchebe na ọnọdụ ndị a tụrụ anya ya, ọ bụ ezie na ọnọdụ akpaka mgbe ụfọdụ na-adaba na ọdịiche dị njọ. Anyị na-achọpụta na agba dị ezigbo mma na akpaka HDR ga-eme ka ihe dịrị anyị mfe. Ọnọdụ abalị na nke ya na-enye nsonaazụ dị mma yana foto na usoro 108 MP na-egosi ezé ya, ọkachasị mgbe anyị buliri foto ahụ elu.
Ogologo Ebe Ọ dịla ala karịa ọkwa nke igwefoto bụ isi, karịsịa mgbe anyị tinyere ya n'ihu ọdịiche siri ike, na-edozi agba ọzọ na mkpọtụ na-egosi ebe ahụ. N'abalị nsonaazụ dị ka atụ anya, mana ọ dị mma na-atụle njirimara.
Ọnọdụ Eserese Ọ ka nwere ọtụtụ ọrụ iji mee, ngafe nke ngwanrọ na eziokwu na ọ nwere nnukwu nsogbu mgbe ị na-ese ihe ndị na-abụghị ndị mmadụ nwere ike itinye anyị ihe na mgbago, na-enweghị mgbagha ọnọdụ kachasị njọ nke ndị enyocha. Ọ bụghị otú ahụ na foto na nso usoro, ebe anyị nwetara ezigbo nsonaazụ dị mma, ọ bụ ezie na ebe a ka anyị na-achọkarị ọkụ.
N'ikpeazụ, igwefoto dị n'ihu na-enye nkọwa zuru oke na iche, ọ bụ ezie na ịgbanyụ oke "ọnọdụ ịma mma" ka yiri ka ọ dị mkpa. Ọ dị mma ịgbalite ọnọdụ HDR dịka igwefoto nwere ike inwe nsogbu na ọkụ, ọ bụ ezie na nke a na-ebelata ogbugba ahụ.
N'ikpeazụ, vidiyo ahụ pụtara maka nkọwa ya na ezi nkwado ya, nke ọma na-agbazi ịma jijiji, akụkụ a juru anyị anya, ee, mgbe niile na igwefoto isi. O doro anya na n'abalị mkpọtụ na nsogbu na-apụta, mana ọ ka na-alụ ọgụ nke ọma megide ọkụ ma na-echekwa nkọwa.
Ihe 120Hz metutara obodo kwụụrụ onwe ya, mana 4.600 mAh na-agbachitere onwe ha nke ọma. Na-akwado ngwa ngwa ngwa ngwa 55W, 50W maka ikuku ikuku na 10W maka nkwụghachi ụgwọ. TAnyị nwere uru na chaja gụnyere ma dị ka onyinye anyị na-ekpuchi (na mbụ). Ihe dị ka otu ụbọchị ojiji na etiti nhazi, ee batrị iche n'etiti 60Hz na 120Hz bụ obi ọjọọ.
Ihe zuru ezu ga-ewe anyị ntakịrị karịa 1h, ọ bụ ezie na ihe dị ka nkeji 25 anyị jisiri ike si na 0% gaa 50%. Ahụmịhe anyị n'ozuzu na ọdụ ahụ dị mma, ọ bụ ezie na batrị na-arịa ihe ndị agbakwunyere na nke a na-ahapụ ya otu nzọụkwụ n'azụ njedebe dị elu na nke a. Ọ bụrụ na ị masịrị ya, ịnwere ike ịzụta ya site na 749 na nsụgharị ya na-acha anụnụ anụnụ na nke ojii na Amazon.
Nzube na arụmọrụ nke na-eche na adịchaghị
Ọtụtụ atụmatụ na ezigbo ihuenyo
Batrị na-ata ahụhụ na 120 Hz
Igwefoto bụ otu nzọụkwụ n'azụ ọnụahịa ahụ
Abịa dị nnọọ nso na ọnụahịa dị elu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Xiaomi Mi 11: Nyocha, njirimara na ule igwefoto